Articles tagged 'taibu'
ZRSA begins life in England 3 May 2017 HARARE - The Zimbabwe Rising Stars Academy (ZRSA) inaugural squad's attachment in England finally took off on Monday with the 16 talented local cricketers beginning their stint at Liverpool Cricket Club. The cricketers were drawn from all the 10 provinces while others were fetched from South A...
Fica keen on Zim cricketers 25 October 2016 HARARE - The Federation of International Cricketers Association (Fica) says their door remains wide open for Zimbabwe should the local cricketers apply for affiliation with them again. In 2014, Fica made concerted efforts to help the now-defunct Zimbabwe Professional Cricketers Association (ZP...
Zim cricketers need union: Taibu 18 October 2016 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) convener of selectors Tatenda Taibu insists there is an urgent need for local players to form a union which will negotiate for their welfare. At the moment, local cricketers are negotiating their contracts with ZC on an individual basis after the collapse of the ...
It turned political — Taibu 10 October 2016 HARARE - Our cricket correspondent Dean du Plessis caught up with new Zimbabwe Cricket (ZC) convener of selectors Tatenda Taibu to discuss about his return to the game after a four-year hiatus. Below are excerpts of the interview. Q: It can't be a complete interview with Tatenda Taibu witho...
I want to bring change to ZC - Taibu 10 October 2016 HARARE - Our cricket correspondent Dean du Plessis caught up with new Zimbabwe Cricket (ZC) convener of selectors Tatenda Taibu to discuss about his return to the game after a four-year hiatus. Below are excerpts of the interview Q: Well Tatenda, I think I should start off by welcoming ...
Taibu slates Ntini's tactics 17 August 2016 HARARE - New Zimbabwe Cricket chief selector Tatenda Taibu has criticised caretaker coach Makhaya Ntini's approach following the recent home Test series 2-0 defeat to New Zealand. In a post-first Test match selection report to the board and seen by the Daily News, the outspoken former Zimbabwe...
Fans react to ZC changes 2 June 2016 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) changes to the technical department and playing staff have been met with mixed feelings by fans. Head coach Dav Whatmore was shown the exit while captain Hamilton Masakadza was also relieved of his duties and replaced by spinner Graeme Cremer on an interim basis....
Taibu in cricket U-turn 1 June 2016 HARARE - Former national cricket captain Tatenda Taibu has replaced Kenyon Ziehl as Zimbabwe Cricket (ZC) convener of selectors following a reshuffle that also saw coach Dav Whatmore lose his job yesterday. Batsman Hamilton Masakadza was also relieved of his captain duties and was replaced by ...
An idea whose time had come 14 February 2014 HARARE - When Tatenda Taibu famously gathered local and foreign press on the eve of Zimbabwe’s Test comeback two-and-half years ago after courageously deciding he would let the world know that all was not well behind the façade of the hype surrounding the historic occasion, his teammate, Raymond ...